रंगीन बहुरूपदर्शक: भारत - एक सारा देश मा एक उन्माद को रंग - संसारमा
रंगीन बहुरूपदर्शक: भारत — एक सारा देश मा एक उन्माद को रंग — संसारमा
भारत मा, खराब कुराहरू के गर्न अविश्वसनीय छ ।. र अन्य मा छ यो छ जो मा देश को सुन्दरता मा रंग सचेत छ । जहाँ सुन्दर समुद्र तट, देवता मा फ्यूज रंगीन र अनन्त परिवहन क्रलर एक चित्रकला । जहाँ मा महिला गरेको हतियार साँप आफ्नो तरिका को टाउको, र छाया को रात को रूपमा दुष्ट को अचम्मलाग्दा रंग को दिन. भारत दिइएको छ संसारमा पवित्र पर्व, हिन्दु»वसन्त चाडमा को रंग»हो । एक पटक भेला गरेर अब, मान्छे सबै महाद्वीप मा, को रंग संग पाउडर मा यो हालेका र. पवित्र रूपमा, पश्चिमी संसारमा, प्रतिबद्ध छ, सानो छ संग गर्न धर्म र धेरै संग गर्न पार्टी । पवित्र जस्तै, भारत, प्रतिबद्ध छ, एक पवित्र अर्थ र संग सम्बन्धित छ आशिष्हरू र. के को लागि सबै पवित्र पर्व विश्वव्यापी: लिङ्ग सीमा, उमेर मतभेद अब एक भूमिका खेल्छन्, रंग, आवरण, कम्पनी को र को बाहिर पिटे वक्ता सडकमा मा कायापलट छन् एक रोगन विकार. तर रंगीन पप कैंडी पनि बलात्कार देशमा समूह र नकारात्मक, र क्रूर अन्याय छ । एक दुष्ट स्पार्कलिंग बहुरूपदर्शक.
भारत पनि रातो, हरियो, गुलाबी, नीलो, सुन्तला वा बैजनी. प्रत्येक यात्रा, रंग मिश्रण मा एक बक्स को को छाप छ । एक फरक तस्वीर. एक सिद्धान्त को रंग मा भारत पर्यटन । यो रंग मा उपलब्ध छ लागि भारत साहस र बलिदान, साथै लागि रूपमा, र छ । भारतको यातायात यस्तो छ को एक मिश्रण संग रातो क्रोध र पहेलो संग डाह । एक धमिलो देखि गाई, मान्छे, ट्रक विपरीत मा राजमार्ग कार र अधिक-को-हिल राजदूत । ट्राफिक नियम अधीन छन् अर्थ, र प्रत्येक यात्री बेस हुनेछ, यो एक समस्या मा एक चालक, पारित गर्न साधारण छ के, सस्तो र अपेक्षाकृत सुरक्षित छ । पनि सुरक्षित, रेल छ — किनभने त्यो हो, जहाँ बस्न निद्रामा छैन सँगी यात्री मा पाङ्ग्रा को एक वाहन मा. ट्रयाकको मा भूमि गर्न आफ्नो लथालिड़गको अवस्था मा, सात वर्ग, सात को सुन्तला, जो छोड्न लागि सीमित कोठा. पुस्तक एक रेल यात्रा, एक जोडी को रोमाञ्चक साँझमा छ । यो वर्ग छान्नुभएको सकिन्छ देखि एक मात्रा मा लापरवाही गर्न नीरस सुरक्षा । कसले के गर्न चाहनुहुन्छ मुख्यतः ट्रयाक, र पूर्वाग्रह बिना आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न गर्नुपर्छ नगर्न संग नजिक सम्पर्क भारतीय यात्रा दिन र पहिलो वर्ग चयन गर्न । यो पक्कै एक अनुभव को मामला मा हुनुपर्छ, स्थानीय रंग यो — तर कुनै अभाव छ, जे भए पनि । भारत उम्कन सक्दैन भारत-यात्री, कुनै कुरा कसरी महंगा उहाँले खान्छ, र यात्रा । भारत मा, अन्य कुराहरु, को रक्षा को लागि, यो दुष्ट आँखा । आमाबाबुले चारै आफ्नो बच्चाहरु संग आँखा, तिनीहरूलाई रक्षा गर्न यस विरुद्ध छ । मानिस वा महिला कि, कसैले गर्न भारत यात्रा जस्तै, एक मा रात. परिणाम देखिन्छ । नीरस, उत्सुक, सोधपुछ, संगी, गाढा आँखा । के एक दुखाइ छ । के गर्छ: अन्धकार सामान्य मा, र. महिला जस्तै पुरुष, सीमित हुनुपर्छ लामो प्यान्ट र लामो बाहुला शर्ट, ब्लाउज, बस मा उत्तर. बरु रंगीन स्पेगेटी पट्टा टप बिना ब्रा, एक गाढा ब्लाउज संग एक उच्च- बटन सरल यात्रा पट्टी. र निःशुल्क अनुसार कार्ल: यो देखिन्छ राम्रो पनि छ । नीलो आकाश को रंग र अनन्त छ । यो पनि लागि घरेलू शान्ति । जबकि हामी मापन युरोप मा हाम्रो शहर को एक नम्बर पुल को तुलना मा भेनिस, भारतीय को आफ्नो शहर मा एक रंग पट । त्यसैले जोधपुर, उदाहरणका लागि, को मामला मा»निलो शहर»मा राजस्थान. वरिपरि । बासिन्दा र एक प्रबंधनीय मुग्ध पार्ने संगीतको को परम्परागत ठाँउहरु (किल्ला, बजार, दरबार) को ठाँउ छ बरु को श्रेणी मा भारतीय साना शहर प्रभावित सबै अधिक द्वारा यसको रंग: घर को पुरानो शहर ढाकिएको छन् शीर्ष देखि तल संग नीलो छ । मूलतः, यो घर रंग को एक प्रकारको थियो पुरातन भित्तिचित्रहरु: बासिन्दाहरूलाई गर्न जाति को. आज, एक अब देख्नुहुन्छ मा जोधपुर त राम्ररी । नीलो दिन्छिन् गर्न शहर को छवि, राम्रो देखिन्छ र मानिन्छ छ एक सही अपवित्र फाइदा: यो गर्नुपर्छ निरुत्साहित लामखुट्टे. यो रंग मा उपलब्ध छ भारत शुद्धता लागि, तर पनि लागि र पीडा. भारत एक महिला समस्या छ । राम्रो, भन्नुभयो संग एक समस्या महिला । तिनीहरूले गणना विशेष गरी उत्तर मा, को एशिया मुख्यतः रूपमा, एक लागत. यो छ भने एक उखान: एक केटी छ हुर्काउन गर्न कसरी लाग्नुहोस् बगैचा को छिमेकी । यो शुरुमै दाइजो भनेर जस्तै एक भारी कुहिरो मा विवाह । तापनि आधिकारिक प्रतिबन्ध, यो ड्राइव धेरै परिवार मा दिवालियापन । गर्भपतन को बालिका निषेध गरिएको छ, हुनत, आज पनि, मानक छ । अधिक छ: एक केटी आउँछ संसारमा छैन, यो हत्या, दुर्लभ वा मृत्यु को बेवास्ता छ । उमेर पाँच वर्ष पुग्न मात्र आधा रूपमा धेरै केटीहरूलाई रूपमा केटाहरू छ । जसले पुग्नेछ वयस्क उमेर गर्न, आशा, छैन, कार्य, बलात्कार, र बाध्य मिस हेर्न । भारत मा बालिका जस्तै हो चिनियां माटो मा भरिएको संसारमा बायाँ हात । देश छ, यो आदर मा एक सेतो स्वेटर, समस्या हरेक. भारत महसुस हुनेछ, यो तिर मनोवृत्ति महिला पनि भन्ने तथ्यलाई कारण केही देश, सडक छवि मा लगभग महिला. रंग रातो छ भारत को लागि प्रेम र सुन्दरताको लागि तर पनि डर र आगो छ । भारत एक तालिका को आतिशबाजी बिना -प्रमाणपत्र छ: तपाईं थाह कहिल्यै, यो के हो, कहिल्यै रूपमा भीषण वा यो अहानिकारक छ । मात्र एक कुरा निश्चित छ: छापे जला मा स्मृति जस्तै एक स्पार्क मा. विदेशी डाउनलोड गर्न कुना मा, एक संस्कार हो, को पाठ्यक्रम, संग साझा साङ्केतिक भाषा यसबाहेक, एक असहाय नजर प्राप्त गर्न पर्याप्त छ एक मदत हात पर्याप्त छ । खैरो दैनिक जीवन दूर छ जस्तै खरानी । अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने आगो र शुद्धता गर्न आवश्यक छ कि यात्रा वाराणसी, पर्खने कोठा लागि मृत्यु भएको छ । शहर मा आध्यात्मिक ठाउँमा देश र पाठ मा नम्रता र । यो पनि छ, जो मा शहर सबै रंग को देश क्लब र बाक्लो खैरो को.
शहर को ग्रेडियन्ट
बैंगनी भारत मा छ लागि दुःख, शोक, र चिन्ता. सबैलाई जान्छ जो भारत छुट्टी मा, तपाईं आशा हुँदैन भन्ने तिर मनोवृत्ति पर्यटक भित्र छ एक फरक तुलनामा महिलाहरु को देश — मात्र कि पश्चिम अगाडी भित्र को छवि अलिकति केटी । द्वारा क्रूर बलात्कार को एक भारतीय महिला दिल्ली मा डिसेम्बर मा — र विरोध पछि — को विषय छ संसारमा र पनि देश मा, अधिक र अधिक मा ध्यान छन् । गर्ने सबैलाई मा देखिन्छ को अनुहार भारत थियो अब यो नीलो अन्तर्गत लगातार आँखा हेर्न, जो संग पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ एक धेरै रहनसहन को कवर छैन यो । बैंगनी हुन मानिन्छ छ»रंग को अन्तिम प्रयास»- को लागि भारत र महिलाका लागि यो समय थियो. तर, परिवर्तन वा एक टर्न अराउंड देश मा छ धेरै छैन हेर्न । बलात्कार अझै पनि एक विषय हो । र पर्यटक लागि, तैपनि. तपाईं जान हुँदैन मा रात को सामने ढोका गर्न, टाढाको ठाउँमा, मा, कार सधैं पछि सुरक्षा जाँच, मा मात्र छैन, एक ट्याक्सी मा कुनै एक टैक्सी मा प्राप्त, र यति मा । मात्र नेताहरूले केही सुझाव देखि यात्रा गर्न र वेबसाइटहरु साथ दिनु भनेर पर्यटक, र पर्यटक माध्यम ले एक यात्रा मा भारत । त्यहाँ यति धेरै यो असम्भव छ लागि पालन । कतै को जोखिम सधैं छ । एक को एक बिट गर्न पर्छ भर आफ्नो किस्मत । र वास्तवमा यो छ कि छैन यो चरम गर्न । रंग लागि खडा मिठास, सुगन्धित र नरम छ । तर पनि रंग को स्वागत गुलाबी थाह छ । रूपमा वेल्स को राजकुमार. घोषणा आफ्नो यात्रा मा शहर जयपुर (राजस्थान) थियो, स्थानीय राम सिंह एक विचार संग:»‘ सम्पूर्ण शहर को एक चिन्ह रूपमा स्वागत गुलाबी रंग.»भने र गरेको: आज, त्यहाँ छ, पनि एक व्यवस्था छ, जो बासिन्दाहरूलाई को पुरानो शहर संरक्षण गर्न गुलाबी । शहर विभाजित छ, प्रत्येक समर्पित एक विशिष्ट शिल्प — यो विचार छ पहिलो»योजना»शहर मा भारत । मार्फत सानो विन्डो को किस, प्रसिद्ध महल को बतासलाई, प्रयोग गर्न पालन गर्न सक्षम हुन को महिला सदस्यहरू को शाही घर, को जल्दी र मा को अगाडि सडक निर्माण — मीठा, एक हात मा लगाएको लथालिड़गको अवस्था मा अन्य । मा जयपुर पनि ऐतिहासिक वेधशाला, जनवरी, एक संयोग भन्दा बढी — के एक राम्रो ठाँउ हुनेछ लागि कुञ्जी प्वाल. हरियो भारत मा छ लागि आशा र नयाँ शुरुवात छ । देशमा प्रस्ताव अविश्वसनीय संभावित लागि सौन्दर्य लागि, बेवस्ताई लागि, स्वतन्त्रता र समानता । जहाँ कुनै छ»देश»वा»भारत»मा सबै, धेरै धेरै ठूलो र विविध को एशिया छ । चाहन्छु जो वरिपरि यात्रा गर्न एक स्त्रीको रूपमा, एक्लै सक्छन् जो साँच्चै मात्र हुन निरुत्साहित छन् । छ जसले यति धेरै सल्लाह छन्, देश को भागहरु गर्न दक्षिण जस्तै, केरल वा गोवा गर्न यात्रा । यहाँ यो छ संग, कम जोखिम र बढी समानता छ । यहाँ पहेलो छ लागि अझै पनि अनन्त समुद्र तट, नीलो को, र परिणामस्वरूप हरियो पूर्ण शक्ति छ । अन्ततः, भारत जस्तै एक बिट एक दीक्षा अनुष्ठान. कुनै कुरा कसरी धेरै सानो वा एक यात्रा मा के भइरहेको छ, हरियो पछि कान त छ, अझै पनि त्यहाँ — त्यहाँ भएको मिश्रित तर सबै अन्य रंग । अन्तमा, रंग मिश्रण घरमा अनुसार आफ्नो धेरै आफ्नै व्यवस्था को नियम छ । अन्त मा भारत को सुनको.
छैन एक शुद्ध सुन । तर यो न्यानो महसुस
र कठिन छ मा प्राण छ ।
← के विवाहित महिला मा भारत भिडियो प्रयोग डेटिङ. भारतीय डेटिङ
छिमेकीलाई प्रेमलीला च्याट, च्याट र प्रेम मा गिरावट मा जर्मनी गरेको प्रमुख प्रत्यक्ष-डेटिङ पोर्टल हो । →